Amaqhinga we-10 Social Media Akhulisa Amasheya Nokuguqulwa | Martech Zone
Ngokuphikisana nenkolelo evamile, ukumaketha ezokuxhum kungaphezu kokuhambisana nokuthunyelwe kwakho ku-intanethi. Kufanele uqhamuke nokuqukethwe okunobuciko futhi okunethonya - okuthile okuzokwenza abantu bafune ukuthatha isinyathelo. Kungaba lula njengomuntu owabelana ngokuthunyelwe kwakho noma aqale ukuguqulwa. Ukuthandwa okumbalwa namazwana akwanele. Impela, inhloso wukuthola igciwane kodwa yini okufanele yenziwe ukufeza lokho?
Kulesi sihloko, sibheka amasu ezokuxhumana nabantu akhulisa amasheya akho nokuguqulwa kwabantu. Senza kanjani ukuthi abantu benze okuthile ngokuthunyelwe kwethu? Yini ezobenza bafune ukwabelana ngokuthunyelwe? Sibhala uhlu lwamathiphu awusizo kuwe:
Abantu banomkhuba wemvelo wokuphoqelela imibono yabo kwabanye. Yize lokho kungabonakala njengokucasulayo, ungakusebenzisa lokhu kuzuze wena futhi wenze izinhlolovo! Amapulatifomu ezokuxhumana nabantu ahlinzeka nge-poll noma isici sohlolo ngakho-ke sebenzisa lokho. Ungathumela ngento elula njengokuthi iyiphi indawo engcono yeholide, okufanele uyiphuze, noma uma becabanga ukuthi kufanele ugunde izinwele zakho noma cha. Ungakusebenzisa futhi lokhu ukwazi okuningi ngokuthandwa kwabo ngokubuza ngemibala, yiziphi izinto abangathanda ukuzenza, noma yiziphi izinsizakalo abafuna ukuba nazo. Into enhle ngocwaningo ukuthi iphuma njengemibuzo engahleliwe ngakho abantu abesabi ukunikeza amasenti abo amabili.
Bacele ukuthi bajoyine imincintiswano
Iningi lama-blogger lithole abalandeli ngokuqala imincintiswano. Lokhu kukhulisa ukuba khona kwakho ku-inthanethi, futhi uthola ukuguqulwa ngomzuzwana ngoba izivakashi zakho zamakhasi zidinga ukwenza okuthile ukuze zibe yingxenye yomncintiswano. Ungasebenzisa futhi leli thuba ukukhuthaza ikhasi lakho futhi uthuthukise hhayi ukuthandwa nokwabelana kuphela kepha namazinga wokuguqulwa.
Qalisa izikhathi ze-Q & A
Uma ufuna ukujulisa ulwazi lwakho mayelana nephrofayili yabantu abavakashela noma ngokungahleleki badlulise okuthunyelwe kwakho, bamba iseshini yombuzo nezimpendulo. Lokhu kusebenza ngoba noma ngabe bayayivuma noma cha, abantu bayayithanda lapho othile ebuza umbono wabo. Isidingo esithile sigcwaliseka lapho othile ebacela ukucaciselwa. Le yindlela enhle kakhulu yokuthi uqhubeke uqonde abantu kunethiwekhi yakho futhi uqhamuke namasu azosiza ukuthambekela kwakho kokuthunyelwe okuzayo.
Ingabe lezo Zithombe Ziyasuswa?
Ngalokho, sisho, ulayishe amavidiyo. Isithombe sihle, kepha asikwazi ukuphika ukuthi iphesenti elikhulu labasebenzisi be-inthanethi banentshisekelo kokuqukethwe kwevidiyo. Ngokuya ngocwaningo olwenziwe yiSocial Media Examiner sonke esikwaziyo njengoFacebook, abasebenzisi badla amahora ayizigidi eziyikhulu ukubukela amavidiyo nsuku zonke. Sebenzisa lokhu futhi ukhuphule izinga lokuguqulwa kwakho ngokulayisha amavidiyo amaningi!
Isikweletu sezithombe: I-Buffer Social
Uma uthumela kanye ngesonto akumangalisi ukuthi ukutholakala kwakho ku-inthanethi kuphansi. Into ebaluleke kakhulu okufanele uyikhumbule yilokhu: ukuzibandakanya kwakho kwezokuxhumana nabantu kuxhumene ngqo nobuningi bokuthunyelwe kwakho. Manje, imvamisa incike kwinkundla yezokuxhumana oyisebenzisayo. Uma kuyi-Facebook, ungathumela okungenani kanye ngosuku kepha uma usebenzisa i-Twitter, kungadingeka ukuthi uthumele okungenani kanye njalo emahoreni amabili ukugcina ubukhona bakho ku-inthanethi.
Njengoba yonke into ishesha kangaka, abantu sebephelelwe yisineke. Ukudla okusheshayo kuthathwa kalula kunokudla okuhle ngoba abantu abasazimisele ukulinda ukudla kwabo. Okufanayo kuya kulokho esikubeka ku-intanethi. Uma kunamagama amaningi, themba ukuthi abantu bazomane badlule badlule kuwo. Ukuxazulula lokhu, guqula leyo ndatshana ibe yi-infographic. Isethulo esibonakalayo solwazi ngesimo sezibalo ezahlukahlukene, idatha, noma ukuqhathanisa sijatshulelwa kakhulu ngabafundi, ngakho-ke i-infographic ibalulekile. Ngokwakha ihluzo, ungalahla ngamathuluzi afana ne- Canva futhi uthole ugqozi lokuthi ungayakha kanjani i-infographics engagcini ngokunaka kepha futhi ikhulise ukuguqulwa.
Ukuhleka yiMithi Engcono Kakhulu
Wonke umuntu udinga ukuhleka okuhle ngezikhathi ezithile ngakho-ke layisha ukugqwayiza kwe-GIF noma ama-memes noma nini lapho ungakhona. Ungakwenza lokhu ukuthola amahlaya kokuthunyelwe kwakho. Manje, lokhu akukona nje ukwenza abantu bahleke; kumayelana nokukhombisa abantu ukuthi uyangeneka ukuthi unamahlaya athile kuwe. Abantu abahlekisayo bahlala kulula ukuxhumana nabo. Uzomangala ukuthi amasheya nokuguqulwa kuzokhuphuka ngokushesha kangakanani lapho ulayisha i-meme.
Kwenze kube lula kubantu ukuthi babelane ngokuthunyelwe kwakho
Elinye lamaphutha avame kakhulu okwenziwa ngabashicileli ukulayisha okuqukethwe futhi balindele ukuthi abantu bathole lapho kunenkinobho yokwabelana etholakala khona. Noma ngabe uku-platform yezokuxhumana noma iwebhusayithi, qiniseka ukuthi izinkinobho zakho zokwabelana nabantu ziyabonakala.
Shesha Lapho Uphendula Imilayezo
Qiniseka ukuthi uphendula imilayezo namazwana ngokushesha. Abantu abanesikhala esiphansi sokunaka futhi balahlekelwa yintshisekelo lapho othile ethatha isikhathi eside ukuphendula imibuzo yabo. Ngokuphendula imiyalezo ngokushesha, unikeza isithombe sokuthi uyasebenza ku-inthanethi nokuthi ungazinakekela izidingo zabo nganoma yisiphi isikhathi. Ungasebenzisa futhi izimpendulo ezizenzakalelayo ukubazisa ukuthi uwubonile umyalezo wabo futhi uzobaphendula ngesikhathi otholakala ngaso. Lokho kusengcono uma kuqhathaniswa "nokubonakalayo" okuvela ebhokisini lemiyalezo ngoba lokho kuzobenza bazizwe sengathi ubanaka ngamabomu.
Khombisa Umusa Njalo
Cabanga ngama-akhawunti wezokuxhumana owalandelayo. Kungani ubalandela? Yiba uhlobo lwe-akhawunti yezokuxhumana ohlale ufuna ukuthola izibuyekezo kuyo. Hlala njalo ezingxoxweni, bese umaka abantu obacaphuniwe ngoba lokhu kuzobenza bazizwe ukuthi uyabazisa futhi uyabahlonipha. Beka iphrimiyamu ekudalweni kokuqukethwe, futhi uphromothe abanye ikakhulukazi uma ucabanga ukuthi umsebenzi wabo yinto abalandeli bakho abangayithanda. Phana ngezindaba zokwabelana, imininingwane, imininingwane, izinto ezizobaluleka kubalandeli bakho. Lapho ungesabi ukukhuthaza abanye, abalandeli bakho bazokuzwa lokhu futhi bazobenza bafune ukwabelana ngokuthunyelwe kwakho ngisho nangaphezulu.
Ukudalula: Martech Zoneisixhumanisi sokusebenzisana se- Canva isetshenziswe kulesi sihloko.
Tags: ukukhulisa amasheyai-bufferimincintiswanoAmahlayaizithombekhulisa ukuguqulwaumusaI-Marketing Infographicsimvamisa yokuthunyelweizikhathi ze-q & Aumbuzo nempenduloUkwabelanaizithombe zokuxhumana nabantuimpendulo yezokuxhumanaukwabelana ngezokuxhumanaUkuhlola
Ukungeza i-Email Preheader Kukhuphule Isilinganiso Sokubekwa Kwebhokisi Lemilayezo Engenayo nge-15%